Mai Chibwe VekwaZimuto: Chibereko chiri padivi
Ndoda kumboongorura dambudziko rechibereko chomunhukadzi chakarerekera kurutivi. Kune mabato maviri anoti
Asi dzimwe nguva vatauri vanoti
Ngatitange nokuhwisisa kuti chibereko hachina kunyatsosungwa nemabhaudhi sezvakaita injini yetarakita kana bhazi. Pachiri chakagobatwa nebharanzi yemamasuru zvokuti chinokwanisa kufambafamba zvichibva nokuti murinda ari kuitei. Saka chibereko chinokwanisa kutarisa padivi uye kurerekera kumashure mukova wotarisa padivi.
Kuvanhukadzi zvinoita kuti chibereko chinge chakarerera kumashure kozoitawo mukova wechibereko panova panobuda nomwana muchibereko pakuzvara, unokwanisawo kutsveyama zvokuti hauchatarisi pakaruramana nechitubu chinopinda chombo. Kune vati kurei kusvika makore anoita 50dambudziko iri rinowedzera kuwanikwa mavari asi hazvirevi kuti tese ndiko kwatiri kuenda. Vamwe havazviiti.
Tarisa papikicha uone kuti papikicha yokutanga inoratidza chibereko chakagara zvakanaka chakarerekera mberi zvokuti
1 Kana ukavata nemanhede murume akakupinza chombo zvinoonekwa kuti paanokupa urume, hunonoungana pedo nomuromo wechibereko.
2 Ukafongora pakuiswa, chibereko chinenge chiri pakanakazve pokugamuchira urume
3 Ukaita mimba inokurira mberi kwako pasina puresha paura.
Mwana kana oda kutendeuka haanetseki.
1 Chibereko chamira kumusoro kwechitubu kureva kuti chaita zvokumuka kunozemberana noura
2 Murume akakupinza chombo mukatanga kukoirana unokwanisa kugwadziwa nazvo.
3 Kana chikazara ropa rekumwedzi unokwanisa kuhwa kupuresiwa nouremu hwacho
4 chinopuresa kuseri kwenzira yeweti saka unokwanisa kungogara uchivhinza weti
5 Unohwa kusungwa mudumbu kuti handizvo zvamunofanira.
6 Unogarobata zvigwere kupffura vamwe
7 Ukaenda kwaDoctor anokuzama kuti ugare uchisunda chibereko chichirerekera mberi asi kazhinji vanoda kubvisa chibereko.
1 Chibereko chatushanduka kurerekera shure
2 Chagara paura zvokuti kuita tsvina konetsa
3 Ukabata mimba chakadai mwana anokwanisa kunetseka chose kukura uye kuzotendeuka oisa musoro pasi kuti azvagwe
4 Unogarohwa musana
5 Ukapinzwa chombo unohwa kugwadziwa
6 Zvigwere zvinowanda zvaunogarobata zvepamberi chimwe chazvo iJeko. (Tarisa pandakanyora nezveJeko)
7 Ukaziva kuti unechibereko chakadai ukaenda kwaDoctor anokuudza kuti bviswa chibereko. Kana uchida mwana imbomira.
Zvinokwanisika kuitika kuvanhukadzi vachiri kuzvara kusvika pakuti chibereko chikarereka kudai une mimba unohwa musana kugwadza nguva yese yemimba. Kana chibereko chikarereka kudai zvinokonzera ropa nezvimwe zvinomhanya mutsinga kusafamba zvakanaka. Zvadaro chibereko chinoshaya kudya kwakakwana zvokuti zvimwe zvezvachinoita zvinoshoteswa. Sokuti zviya zvandakambotaura kuti chibereko chinozvigezesa chichirasa tsvina yese paunoenda kumwedzi paya. Zvinokwanisika kuti kuzvigeza kuya kunoshaya samba nengari yokuti maHORMONES anochiudza kuti chigeze anenge asina kukwana. Zvikadaro tsvina iya yange ichifnira kubuda yega inotadza kubuda yese zvigwere zvochitanga mutsvina yasaramo iya munhu otanga kusahwa zvakanaka mumuviri wake.
Ipapo zai anenge achingokandira mwedzi umwe noumwe zvokuti mimba anokwanisa kuibata. Asi unozotanga kuhwa musana nemimba yako iyoyo. Ukaenda kwa Dhokotera unonoudzwa kuti vakdzi vakawanda vanazvo saka dzokera kumba undomirira kusvika wazvara. Unogwadziwa nazvo asi varapi vasinei nazvo. Chero usina mimba unokwanisa kunetseka nechibereko chiri padivi kudai.
Kana zvadaro vamwe varapi vanokwanisa kukuudza kuti unofanira kubviswa chibereko asi pakubviswa apa ukasachenjere vanobvisa zvikandiro zvako zvemazai zvinova zvinokupa mamwe maHORMONE ako. Wabviswa unokwanisa kukasira kubata chigwere che Dementia nokuti musoro unenge usina mamwe maHORMONE muviri wofunga kuti wachembera iwe usina kuchembera. Musangoterera zvinorebwa nevarapi nokuti pamwe vari kutodzidzawo zvokuita.
Zvinotaridza kuti chibereko chiri padivi
Kugwadziwa kana woda kuenda kumwedzi kana kuti uri kumwedzi
Kugwadziwa pakuvata nomurume
Kugarohwa musana pasina chaunoona kuti chikonzero
Kuita manyoka zvikuru nguva yokumwedzi. Chibereko chakarerekera kumashure chinonogara pamatumbumakuru kuita svina kugozhera muviri nokuti ura huri kusvinwa nouremu hwechibereko, zvikuru kana une mimba chibereko choramba chichikura chichiwedzera kurema.
Kuita tsvina inonhuwa zvakawedzera
Kutadza/kunonoka kuita mimba
Kuzvimba nokugwadziwa nezvikandiro zvemazai (overies)
Kugarovhinza weti zvishoma zvishoma
Zvokuita kana wafungira
Kana wafungira kuti une dambudziko iri kasira kuenda kundoongorogwa kuti ndizvo here. Wadaro usakasira kuterera nyaya yokubviswa chibereko. Imbomira nokuti pane zvaunokwanisa kuita iwe muridzi kugadzirisa nyaya iyi kana isati yanyanya kushata. Kana usina vana uchida kuzoita vana usatombobviswa chibereko nokuti hauzokwanisi kuita vana.
Chokutanga kuita ndezvinoudzwa vane mimba kuita kana zvibereko zvavo zvatarisa padivi kana kurerekera kumashure. Zvinonzi vaite ma EXERCISE anohi KNEES TO CHEST anoratidzwa papikicha yandaisa iyi. Unotoshinga kugaroita nguva nenguva chero pawagonera asi zvinongoshanda kwenguva diki. Nguva diki iyoyo iri nani pane kusatomboshanda kuramba chibereko chakarereka. Zvakadaro unofanira kuramba uchingoita pawagonera.
Kotizve kana pane munhu anokwanisa kukuita PELVIC MASSAGE nguva nenguva. Kudzidzisa murume wako chinhu chakanaka, zvikuru kana ari munhu anohwisisa nezvenyaya iyi uye achidawo kuti upenyu hukurerukire mugare nomufaro mumba.
Kana mimba ichikura
Tarisa uone kuti kana mimba ichikura chibereko chiri panzvimbo yakanaka chinokura chichienda mberi kwako. kumwe kwese hakuna dambudziko. Saka ukaona wongonetseka nezvimwe, ziva kuti chokutanga kufungira ndechokuti chibereko chako hachisi pakanaka. enda undooneka.
Ndimwe nguva chibereko chinongochinja nzvimbo choga asi chozodzokera pachinofanira. Ukafungira kuti pane zviri kuitika, sokuti mavatire aunoita, umbochinja mavatire uone kuti zvinodii. Madhokotera haana nguva yokukubvunza zvakawanda vanongoda mari yavo nokukupa mushonga chete.
Tiri kuenderera mberi nayo nyaya iyi.
Posted by Mai E Chibwe at 13:10
Thank you very much mai Chibwe for such teachings you have no idea how you helping pple out there as for me wow God bless you you so much gifted panyaya yechibereko iyi ini ndorwadziwa ne jekoo is the problem same neyama mentioner muchity if u want to knw kuty chibereko chiripadivi some of the. Symptoms uve said like kurwadziwa before period is it same thing ne jekoo or they are two different things ndatenda hangu keep well mama!!!
Imboverenga apo pakahi
Zvakasiyana neJeko asi zvinoitika pakafanana paChibereko.
Ndashaya nguva yokunyatsopedzisa nyaya iyi asi ndichapedzisa.
Is the term ENDOMETREOSIS related to kufuratira kwechibereko nekuti madoctors akati ndine endometreosis mushure mekunge ndanetseka kwemakore anopfuura matatu ndichizama kuita mimba yechipiri.my first born is 11yrs and my 2nd is 18 mnths.i am 28yrs and hv been trying again to fall preg since Jan with no vail.im worried that i will face this problem again.pliz help
Endometriosis i Condition yokuti nyama dzakafanana ne dzakagadzirisa LINING OF UTERUS dzinongotanga kukurawo pane dzimwe nzvimbo mumuviri dzichitevedzerawo kukura kweLINING iya sokuti wava kuda kuenda kumwedzi idzo dzongokurawo asi dziri kuzhe kwechibereko saka zvinogwadza muviri padzinenge dziri. Ukazviita izvi unoda management yazvo nokuti zvinokushungurudza. Kune vakadzi vakawanda chose vanazvo. Regai ndogotsvaka nguva yokuzvirondedzera.
28 August 2013 at 16:16